Nepal Auto | अटो जिमखाना भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौ ।
अटो जिमखाना भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौ । 14 Poush, 2074
अध्यक्ष, नेपाल मोटर स्पोर्ट्स क्लब
नेपालमै पहिलो पटक आफ्नै रेसिड सर्किटमा आज शुक्रबारदेखि अटो जिमखाना प्रतियोगिता प्रारम्भ भएको छ । हिमालयन मोटरल्याण्ड, धुलिखेलमा सञ्चालन गरिने सो प्रतियोगितामा ६० भन्दा बढी गाडीले सहभागिता जनाउने छन् । प्रतियोगिताको मूख्य प्रायोजकको रुपमा भक्सवागन रहेको छ भने प्रायोजकको रुपमा गल्फ लुब्रिकेन्ट, रेडबुल, आइसर, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र रिलायन्स फाइनान्स रहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा आयोजक नेपाल मोटर स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष दीपक आचार्यसँग गरिएको कुराकानी :
नेपालमा पहिलोपटक अटो जिमखाना प्रतियोगिता आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ ? कस्तो छ तयारी ?
नेपाल मोटर स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा पहिलोपटक नेपालमा नेसनल जिमखाना कम्पिटिसन हुन लागेको छ । आज पहिलो दिन ट्रायल राउन्ड हुँदैछ । भोलि खास च्याम्पियनसिप हो । ६० भन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा गरेका छौं । दुई प्रकारको प्रतियोगिता हुनेछ । फ्रि ल्याप रेस ७ सय मिटरको ट्रयाकमा हुनेछ । अर्को अटो जिमखाना हो । जिमखानामा प्रथम हुनेलाई इन्डोनेसियामा हुने प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि पठाइने छ ।
सो प्रतियोगिता भब्यताका साथ सम्पन्न पार्न हामी सबैजना निकै मेहनत गरिरहेका छौ ।
मोटर स्पोर्ट्स क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको शुभारम्भ गर्नुभएको छ, यो अवधारणा कसरी आयो ?
हामीले नेपालमा मोटर स्पोर्ट्सको लागि छुट्टै खालको क्लबको आवश्यकता पहिले देखि नै महसुस गरेका थियौ । हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन नहँुदा हामीले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका थिएनौ । जसले गर्दा हामी केही समय अध्ययन, अनुसन्धानमा लागिरहेका थियौ र त्यसपछि २०७२ सालमा नेपाल मोटर्स स्पोर्टस् क्लब गठन गरेका थियौ । जसमा ११ जना कार्यसमिति चयन गरेका छौ । त्यही क्लबले नै हाल विभिन्न प्रकारका गतिविधि गर्न प्रारम्भ गरेको हो ।
नेपालमा भएका अन्य थुप्रैै खेलहरु जस्तै यो मोटर स्पोर्ट्सलाई लोकप्रिय बनाउनका लागी यहाँहरुले कस्ता कार्य योजनाहरु निर्माण गर्नुभएको छ ?
हामीले एक वर्षभित्र जिमखाना प्रतियोगिता र ¥यालीक्रस धुलिखेल, पावर टु पावर स्टेयरिङ्ग, सिन्सियर सिटिजन मोटर ¥याली, कलेज टु कार्ट् ,मार्सल तालिम, ड्राइभर तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, कर्पोरेट जस्ता कोलाबोरेसन क्याम्पिङ र अर्गनाईजेसनल म्यानेजमेन्ट जस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने गरी आवश्यक कार्ययोजना तय गरेका छौ ।
यो क्षेत्रमा कस्तो सम्भावनाहरु रहेका छन् ?
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यस प्रकारका प्रतियोगिता अति आवश्यक छ । यसले खेल पर्यटकलाई भित्र्याउने काम गर्छ । जुन कार्यले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पु¥याउने देखिन्छ । त्यसले गर्दा मोटर स्पोर्टस्मा हामीले एकदमै धेरै सम्भावना देखेका छौ ।
सम्भावनाका कुरा गरिरहँदा मोटर स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा कस्ता–कस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ?
मोटर स्पोर्टस् भन्नासाथ खर्चिलो, फराकिलो र ठूलो ठाउँ चाहिन्छ मेहनत पनि धेरै गर्नुपर्दा थुप्रै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने भने हुन्छ ।
मोटर स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता कस्तो हुनुपर्छ र यहाँहरुले के–कस्ता सहयोगहरु प्राप्त गर्नुभएको छ ?
हरेक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आफैमा महत्वपूर्ण हुन्छ । मोटर स्पोर्टस्को क्षेत्रमा पनि राज्यले नै ध्यान दिनुपर्छ र राज्यले हामीलाई सहयोग नै नगरेको भन्न मिल्दैन । हामीलाई विभिन्न किसिमका सहयोगहरु भईरहेकै छन् र आगामी दिनमा पनि सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ ।
क्लबको अध्यक्षको हैसियतले आम नेपाली जन समुदायहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
म सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, सरोकारबाला निकाय र खेलकुद प्रेमीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो खेल हाम्रो हो, यसबाट राष्ट्रिय, महादेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राष्ट्रको झण्डालाई फहराउन सकिन्छ । यसलाई अरु खेल झै सहज बनाउन सकिन्छ, सबैको सहयोग निकै जरुरी छ । जसले गर्दा सबैले मोटर स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा आ—आफ्नो ठाउँबाट विशेष सहयोग गर्न सबै प्रति हार्दिक अपिल गर्दछु ।
गुणस्तरमा सचेत उपभोक्ताले इनोक नै प्रयोग गर्छन्
विश्वास नै हाम्रो सफलताको आधार
विश्वका ठूला र प्रख्यात भनिएका प्रायः सवैजसो इन्जिन तथा सवारीसाधन उत्पादक कम्पनी...